Waa Sidee Xaaladda Eric Bailly Oo Cusbitaal Ku Yaalla London Loola Cararay Xalay? - Gool24.Net
Waa Sidee Xaaladda Eric Bailly Oo Cusbitaal Ku Yaalla London Loola Cararay Xalay?
Difaaca reer Ivory Coast ee Eric Bailly ayaa xalay dhaawac kasoo gaadhay madaxa dhamaadka qaybtii hore ee kulankii FA Cup ee semi-finalka oo Chelsea ay 3-1 ku garaacday Manchester United.
Eric Bailly ayaa muddo siddeed daqiiqadood ah lagu dhex hayay garoonka iyadoo loo fidinayay gargaar degdeg ah, waxaana markiiba lagu xidhay qalabka neefsiga ka caawiya dadka.
Laacibkan ayaa laga saaray Wembley Stadium, waxaana loola cararay cusbitaal ku yaalla magaalada London oo uu xalay ku baryay, waxaase uu tababare Solskjaer xaqiijiyey in xaaladdiisu wanaagsan tahay oo uu baadhitaano kala duwan mari doono.
Bailly oo ay madaxa isku dhufteen Maguire, dhaawac muuqdaana kasoo gaadhay qaybta dambe ee madaxa, waxa isla xalayba lagu sameeyey tijaabooyin lagu hubinayo inta uu le’eg yahay caafimaadkiisu, waxaana lagu hayay halkaas si looga hor tago in naftiisu khatar gasho.
Solskjaer oo markii ay dhamaatay ciyaartu warbaahinta la hadlay ayaa yidhi: “Eric wuxuu ku sugan yahay cusbitaalka, waxaana lagu samaynayaa baadhitaano, isaga oo maraya nidaamyada caafimaadka.
“Waxa go’day qaybta dambe ee madaxiisa, dhab ahaantiina ma garanayo sida ay xaaladdiisa runta ahi tahay, suurtogal na iima noqonin inaan la hadlo isaga ama dhakhaatiirta daawanaynaysa. Laakiin dabcan, waxa uu waqtigaasi ahaa mid saamayn weyn ku yeeshay ciyaarta.
“Eric waxa uu si fiican u ciyaaray 42 ilaa 44 daqiiqadood, goolkana waxa la naga dhaliyey xilligii aanu la niyad-jabsanayn dhaawaciisa ee ay ciyaartu dib u bilaabantay.
“Eric qayb weyn ayuu naga ahaa, intii uu garoonka ku jirayna wax fursad ah may abuurin kooxda naga soo horjeedday.”